အယ်ဖိုး: Copy Faster
Click ! Image to zoom!
Software ကလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။ ကိုယ်စက်ကနေပြီးတော့ USB Drive ထဲကိုဖြစ်ဖြစ် ၊ တနေရာကနေပြီး နောက်တစ်နေရာကို file size ခပ်ကြီးကြီးထည့်လိုက်ရင် တော်တော်နဲ့ကိုမပြီးဘူး။ စောင့်နေရတယ်။ အဲဒါကလေးကိုမြန်စေဖို့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ အဲဒီ့လိုမျိုးကူးနေတဲ့အချိန်မှာ အောက်က taskbar ကလေးမှာ သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံကလေးကို မြင်ရပါ့မယ်။။ ကျွန်တော့် အထင်တော့ ဘာမှ မသုံးတာထက်စာရင် ပိုပြီးတော့ မြန်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျ.။ သုံးရတာကလည်းထွေထွေထူးထူး သိပ်ပြီးတော့မရှိပါဘူး။ Software ကလေးကို run ပေးလိုက်။ ပြီးရင် ပါတဲ့ Keygen လေးနဲ့ user name ၊ license key ကလေးကိုထည့်လိုက်။ ပြီးရင် Enable Fast copying ဆိုတာကလေးကိုနှိပ်ပေးထားလိုက်ရင်ရပါပြီ။ အသုံးတည့်ချင်ရင်တော့အောက်မှာယူလိုက်နော်.။။ File size ကလည်း ခပ်ပါးပါးကလေးပါ။
Download link Multiupload
Posted by Peace at 11:50 AM